बालबालिकालाई के सिकाउने ? कसरी सिकाउने ?
८ श्रावण २०७६, बुधवार | Jul 24, 2019 | 06:04:13
By radiojanakpur on	 January 6, 2018 Uncategorized
अहिलेका बच्चाहरु स्मार्ट छन् । उनीहरु नयाँ प्रविधिसँग नजिकिन सधै उत्सुक हुने गर्छन् । नयाँ- नयाँ कुरा पच्छ्याउन खोज्छन् ।
जबकी खेलकुदबाट बच्चाले धेरै कुरा आर्जन गर्न सक्छन् । खेलकुदले शारीरिक तथा मानसिक फाइदा गर्छ । आउटडोर गेमले उनीहरुको शारीरिक विकासमा सहयोग गर्छ । रक्तसंचार राम्ररी हुन्छ । जब शारीरिक स्वस्थ्य राम्रो हुन्छ, उनीहरुको मानसिकता पनि सकारात्मक हुन्छ । उर्जावान हुन्छ ।
खेलकुदले अनुसाशन सिकाउँछ । टिमवर्कको महत्व बुझाउँछ । संघर्ष गर्न उत्प्रेरित गर्छ ।